ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားတဲ့ နွားလေးကို တရားနာပီး ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ဆည်က နွားပိုင်ရှင်( ရုပ်သံ) - Thadin
HomeNEWSရုတ်တရက် သေဆုံးသွားတဲ့ နွားလေးကို တရားနာပီး ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ဆည်က နွားပိုင်ရှင်( ရုပ်သံ)
ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားတဲ့ နွားလေးကို တရားနာပီး ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ဆည်က နွားပိုင်ရှင်( ရုပ်သံ)
February 12, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားတဲ့ နွားလေးကို တရားနာပီး ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ဆည်က နွားပိုင်ရှင်( ရုပ်သံ)
ဒီနေ့ ကျောက်ဆည်က နွားပိုင်ရှင်တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့နွားလေး ဖိုးလုံး သေဆုံးတာကို ထူးထူးခြားခြား ဂူသွင်းမြုပ်နှံခဲ့တာကို Facebook မှာ တင်ထားတာလေး တွေ့လို့ တစ်ဆင့် ပြန်လည် တင်ပြလိုက်ပါတယ်… နွားပိုင်ရှင်ကတော့ သူ့နွားလေး သေဆုံးရတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ ခုလို Post တင်ထားပါတယ်….
“ ငါ့သား ဖိုးလုံးရေ မင်းဒီဘဝမှာ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ သေကံမကုန်ဘဲ သေခဲ့ ရပေမဲ့လည်း မင်းနောက်ဘဝကူးပြောင်းအောင် ကောင်းရာမွန်ရာဘုံဘဝကို ရောက်အောင် ငါအကောင်းမွန်ဆုံး ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါမယ်ကွာ နောင်ဘဝဆိုတာ ရှိခဲ့ရင်လည်း ပြန်လည်ဆုံတွေ့ချင်ပါသေးတယ် ဖိုးလုံးရေ မင်းသာဆုံးသွားပေမယ့် ဖိုးလုံးဆိုတဲ့ မင်းနာမည်တော့ ဘယ်တော့မှမသေပါဘူးကွာ. . .
အခုဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ မင်းဖြစ်ရပ်ကိုလည်း ကျောက်ဆည် (ဒုန်းနွား)လောကသားတွေရဲ့ စံနမူနာ တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူထားနေကြမှာပါကွာ”ဆိုပြီး ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ Post တင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်…
နွားပိုင်ရှင်က သူ့နွား ဘာကြောင့် သေတယ်ဆိုတာကို အတိအကျ မပြောပေမယ့် အများစုကတော့ ပြိုင်ပွဲမှာ ပြိုင်ရင်း အမောဆို့သေသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်… သူရေးသားထားတဲ့ (ဒုန်းနွား)ဆိုတာ နွားကို လှည်းမှာ တပ်ပြီး အပြေးမောင်းနှင် ယှဉ်ပြိုင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်. . . .
ဒုန်းနွား ပြိုင်ပွဲ နမူနာ Video
နွားလေးဖိုးလုံးကို ဂူသွင်းခဲ့တဲ့ Video မှတ်တမ်း
နွားလေး ဖိုးလုံး မသေခင်ကပုံ
ကောင်းရာ မွန်ရာ ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် နွားလေး ဖိုးလုံးေ၇
REST-IN-PEACE (PHOE LONE)
Source : Lincolm Billuzz
ရုတျတရကျ သဆေုံးသှားတဲ့ နှားလေးကို တရားနာပီး ဂူသှငျးသဂွိုလျခဲ့တဲ့ ကြောကျဆညျက နှားပိုငျရှငျ( ရုပျသံ)
ဒီနေ့ ကြောကျဆညျက နှားပိုငျရှငျတဈယောကျက သူ့ရဲ့နှားလေး ဖိုးလုံး သဆေုံးတာကို ထူးထူးခွားခွား ဂူသှငျးမွုပျနှံခဲ့တာကို Facebook မှာ တငျထားတာလေး တှလေို့ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ တငျပွလိုကျပါတယျ… နှားပိုငျရှငျကတော့ သူ့နှားလေး သဆေုံးရတာနဲ့ ပတျသတျပွီး ဝမျးနညျးစှာနဲ့ ခုလို Post တငျထားပါတယျ….
“ ငါ့သား ဖိုးလုံးရေ မငျးဒီဘဝမှာ အဖွဈဆိုးနဲ့ သကေံမကုနျဘဲ သခေဲ့ ရပမေဲ့လညျး မငျးနောကျဘဝကူးပွောငျးအောငျ ကောငျးရာမှနျရာဘုံဘဝကို ရောကျအောငျ ငါအကောငျးမှနျဆုံး ဆုတောငျးမတ်ေတာပို့ပေးပါမယျကှာ နောငျဘဝဆိုတာ ရှိခဲ့ရငျလညျး ပွနျလညျဆုံတှခေ့ငျြပါသေးတယျ ဖိုးလုံးရေ မငျးသာဆုံးသှားပမေယျ့ ဖိုးလုံးဆိုတဲ့ မငျးနာမညျတော့ ဘယျတော့မှမသပေါဘူးကှာ. . .
အခုဖွဈပကျြသှားတဲ့ မငျးဖွဈရပျကိုလညျး ကြောကျဆညျ (ဒုနျးနှား)လောကသားတှရေဲ့ စံနမူနာ တဈခုအဖွဈ မှတျယူထားနကွေမှာပါကှာ”ဆိုပွီး ဝမျးနညျးစှာနဲ့ Post တငျထားတာကို တှရေ့ပါတယျ…
နှားပိုငျရှငျက သူ့နှား ဘာကွောငျ့ သတေယျဆိုတာကို အတိအကြ မပွောပမေယျ့ အမြားစုကတော့ ပွိုငျပှဲမှာ ပွိုငျရငျး အမောဆို့သသှေားတာဖွဈနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးနကွေပါတယျ… သူရေးသားထားတဲ့ (ဒုနျးနှား)ဆိုတာ နှားကို လှညျးမှာ တပျပွီး အပွေးမောငျးနှငျ ယှဉျပွိုငျရတာ ဖွဈပါတယျ. . .
ဒုနျးနှား ပွိုငျပှဲ နမူနာ Video
နှားလေးဖိုးလုံးကို ဂူသှငျးခဲ့တဲ့ Video မှတျတမျး
နှားလေး ဖိုးလုံး မသခေငျကပုံ
ကောငျးရာ မှနျရာ ရောကျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးပါတယျ နှားလေး ဖိုးလုံးရေ
ကုသိုလ်​ရပါတယ်​ မျှ​ဝေ​ပေးကြပါ ။ အဘပေးတဲ့ နတ်ဆေး၊ ကင်ဆာပျောက်တဲ့ဆေး… !
ခွဲစိတ်စရာ မလိုတော့ပဲ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ သိသိသာသာ သက်သာသွားသည့် ဆေးနည်း…!
This Year : 177200
Total Users : 536224
Total views : 2426352